Maxaa ka jira in Kenya iyo Somalia ay wada ogolaaday in arinta badda lagu xaliyo hab lagu wada qanci karo - Awdinle Online
Maxaa ka jira in Kenya iyo Somalia ay wada ogolaaday in arinta badda lagu xaliyo hab lagu wada qanci karo
Awdinle Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Nairobi kula kulmay dhiggiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta.
Wasiirka arrimaha dibadda Kenya CS Monica Juma ayaa qoraal ay soo dhigtay barteed twitter-ka kadib kulanka ku sheegtay in Farmaajo uu Kenya u sheegay “inuu ku kalsoon yahay in kiiska maxkamadda ICJ ee ka dhaxeeya labada dal lagu xalin doono hab ay labada dalba ku wadi qanci karaan.”
Qoraal lasoo dhigay bogga madaxtooyada Kenya ee facebook ayaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo muujiyey inuu kalsoon yahay in “muranka badda ee u dhaxeeya labada dal oo hadda hor-yaalla maxkamadda ICJ lagu xalin doono hab ay labada dal ku wada qanci karaan.”
Kala diwanaanshaha u dhaxeeya labada qoraal ee madaxtooyada Kenya iyo wasiirka arrimaha dibedda u dhaxeeyey ayaa ah kaliya in madaxtooyada tiri muranka-badda, halka Juma ay tiri kiiska ICJ, oo isku macno un ku dhamaanaya.
Labada qoraalba laguma bixin wax faah-faahin oo ku saabsan waxa loola jeedo hab lagu wadi qanci karo, hase yeeshee Kenya ayaa muddo olole ugu jirtay in la gaaro xal labada dalba ay ku wada farxi karaan, oo ka baxsan maxkamadda.
Arinta maxkamadda ICJ ma noqon karo mid ay ku wada qancaan labada dal, sidaas darteed waxay u eg tahay inay jiraan arrimo kale oo aan weli sharaxaad laga bixin.
Waxay sidoo kale sheegtay in la isku afgartay in kiiska ICJ uusan saameyn ku yeelan xiriirka labada dal.
Qoraalka kasoo baxay Villa Somalia ayaa lagu sheegay in labada dal ay isku raaceen in dib loo soo celiyo xiriirka labada dhinac, islamarkaana la fududeeyo isu-socdaalka labada shacab, dibna loo soo celiyo dulimaadyada tooska ah ee Nairobi iyo Muqdisho.
Madaxtooyadda Somalia ayaa sidoo kale sheegtay in la isla gartay in masuuliyiinta iyo shaqaalaha rayidka ah ee Dowladda ay dal-ku-galka Kenya ka qadaanayaan goormada diyaaradaha ee dalkaas.
Qoraalka Madaxtooyadda Somalia laguma soo darin warka ay Kenya ku sheegtay in madaxweyne Farmaajo sheegay in kiiska ICJ lagu qancinayo hab ay labada dal ku wada qanci karaan.
Previous articleXildhibaan Mahad Salad: Farmaajo waa inuu Baarlamanka ka hore sheego wuxuu kenya kula heshiiyey
Next articleKenya and Somalia seems to agree ICJ issue to resolve mutual manner.